DB-G mhando Simbi Cord Conveyor Belt Peeling Machine yeSplicing
Iyo DB-G mhando yesimbi tambo inoendesa bhandi peeling muchina irudzi rutsva rwesimbi tambo inoendesa bhandi peeling michina yakatsvakiswa uye yakagadziriswa nekambani yedu yakazvimiririra. Iyo yakakamurwa kuita maviri marudzi: akajairika mhando uye yekuputika-chiratidzo mhando. Zviri nyore kushanda, kushanda kwakanyanya, uye kuderera kwevashandi. Inogona kupedzisa peeling basa remhando dzakasiyana siyana dzesimbi tambo yekuendesa mabhandi. Iyo inowanzo fanika yekubatsira michina yeakasiyana simbi tambo yekuendesa bhanhire vulcanization majoini, ayo anoshandiswa mune akasiyana mamiriro. Dzimba dzepakutanga uye dzekunze kutungamira.
Kuparadzaniswa pakati penzvimbo yekumusoro yekuvhara rabha, yepasi chivharo rabha, yepakati rabha uye simbi waya tambo dzakasiyana siyana simbi tambo yekuendesa mabhandi.
Cold Bond Cement yeRubber Conveyor Belt Kutsemura Adhesive
Antai TM 2020 Cold Bond Cement inotora yeGerman tekinoroji yepamusoro uye fomula. Yakagadzirirwa kuve inokurumidza kurapa simende yerabha yekuendesa bhandi kupetera uye kujoina. Icho chinonamira chakanakira bhandi kubvarura, chigamba uye nemhando dzese dzerabha nhema, kunyangwe pasi pevhu.
Ndichiri kushandisa TM 2020 Cold Bond Cement, inowanzo inoda zvikamu zviviri kupedzisa iro basa zvakakwana. Chekutanga, tembiricha yekamuri inoporesa chloroprene yakavakirwa pane yakasviba yerabha yekunamatira. Kechipiri, kana yakaomeswa neyakaenzana chiyero cheyakaomarara, inoburitsa yakasimba kunamatira pasina chero rubatsiro rwekupisa, kumanikidza kana zvimwe zvishandiso. TM 2020 Cement inokwanisa kusunga rabha kune simbi, rabha kune raibha, rabha kune fiberglass, rabha kune machira, pamwe nekupwanya, kujoina uye kugadzirisa kweye rubber conveyor bhandi. Izvo zvakare zvinokwanisa kunyorera kune mazhinji emarabha ekugadzirisa, kupora uye kugadzirisa.
Kana chero basa rine chekuita nerabha kune simbi, rabha kune rabha, rabha kune fiberglass, rabha kune machira, TM 2020 Cold Bond Cement isarudzo yakanaka.
Rail-yakakwira Spot Kugadzirisa Vulcanizing Press yeConveyor Belt
Rail-yakakwira Spot Kugadziridza Vulcanizing Press yeConveyor Belt, yerabha yekuendesa bhandi nzvimbo yekuchekerera nekugadzirisa muchina kana chishandiso, inoshandiswa kugadzirisa padivi kana pakati perabha yekuendesa bhandi.
Kubatsira kwemuchina uyu ndechekuti iyo yekudziya platen inotsvedza, iri nyore kugadzirisa diki kukuvara pakati pebhandi rekutakura.
Kune akasiyana siyana ekupisa eplaten saizi yesarudzo, 300x300mm, 200x200mm, nezvimwe.
Mutengi anogona kungotiudza zvavanoda zvebasa, saka tinogona kugadzirisa muchina sekuenderana nebasa chairo rinodiwa.
PU PVC Belt Vulcanizing Press ye Thermoplastic Belt Splice
Muchina uyu watonhodza mweya une zvese zvinoriumba zvakabatanidzwa mune chishandiso chimwe, izvo zvinoita kuti muchina ubatanidzwe mukati nyore uye wakagadzirira basa. Kurumidza uye Kutakurika Splicing, unogona kuunza nayo chero kupi nyore.